Window Aluminum Screen - Shiinaha Hebei Samsung Birta Wire mesh
Welded Panel Wire mesh
-Xidhkii Wire mesh
Mandiil dushooda iyo Wire mesh
Birta Wire Taxanaha
isagoo dhaliyay xayndaabka
Chain bowd Link
Hot-dhex galvanized welded Wire mesh
screen suuqa kala Aluminum laga sameeyey oo al-mg silig daawaha in jare Caraabaah. mesh silig Aluminum dhacaa laba fasalada: mesh Aluminum magnesium silig daawaha iyo mesh silig aluminium saafi ah, tolmo wanaagsan leh si gooni gooni ah la silig daawaha aluminium iyo silig aluminium saafi ah. Al Color screen kaneecada: dhalaalaya Silver ama dhuxusha. Aluminum Daawaha cayayaanka Screening waa ka qaalisan Maro adag mesh laakiin si ka badan waarta. baaritaanka Aluminum waa adag oo waarta, sida caadiga ah 18 x 16 mesh, 0,011 baaritaanka dhexroor, ku haboon ...
Min.Order Tirada: 20 Sheet / Sheets
Supply Kartida: 5000 Sheet / Sheets per Day
Screen suuqa kala Aluminum laga sameeyey oo al-mg silig daawaha in jare Caraabaah.
Mesh silig Aluminum dhacaa laba fasalada: mesh Aluminum magnesium silig daawaha iyo mesh silig aluminium saafi ah , tolmo wanaagsan leh si gooni gooni ah la silig daawaha aluminium iyo silig aluminium saafi ah.
Al screen kaneecada Color: dhalaalaya Silver ama dhuxusha.
Aluminum Daawaha cayayaanka Screening waa ka qaalisan Maro adag mesh laakiin si ka badan waarta.
Baaritaanka Aluminum waa adag oo waarta, sida caadiga ah 18 x 16 mesh, 0,011 baaritaanka dhexroor, ku haboon inta badan codsiyada albaabka iyo dariishadaha. Screen suuqa kala Aluminum ma miridhku doonaa, ama caariyaysi. Bixisey in duub ama gogo 'cut.
Mesh cayayaanka leeyahay miisaanka iftiin, iska caabin ah daxalka wanaagsan iyo iska caabin ah miridhku
Codsiga: Sida baaritaanka cayayaanka ama hadh ka dhanka ah duqsiyo badan oo kaneecada, ilaalinta mishiino, wax hawo iyo hesho calaamadaha.
Waxa kale oo aanu siin nidaamka mesh cayayaanka, kuwaas oo si gaar ah loogu talagalay daaqadaha iyo albaabada, oo kaamil ah labada isticmaalka guriga iyo ganacsiga.
Sidee u fududahay in rakibi mesh cayayaanka?
mesh cayayaanka waa mid aad u fududahay in la rakibo. All noocyo our waa laga gooyn karo maqas xoog leh, ka dibna si fudud wana ama ku dhegi galay meel.
Sidee dheer cayayaanka doonaa mesh socon?
Filashada The nolosha mesh cayayaanka ku xirnaan doontaa waxyaabaha la isticmaalo, iyo sida badan ee ku xiran waa in ay xirtaan iyo jeexa. Mesh ugu adag-xiran aan iibiyo waa in biraha sameeyey, iyo waxa loo heli karaa mid ahama ama aluminium.
Our Maro adag iyo mesh bir PVC dahaarka waxyaabo beddelaad ka jaban, laakiin sidaas awgeed waxay u badan oo xasaasi ah iyo waa in la isticmaalo oo kaliya gudaha. Si kastaba ha ahaatee, our mesh xayawaanka waa xoog badan oo laga sameeyey caag la core nylon a.
Waa maxay farqiga u dhexeeya balaariyay oo leh tolmo wanaagsan mesh cayayaanka ?
Waxay jeelyihiin in si fudud, mesh ballaariyeen waa ka itaal iyo dhawraa ay qaab marka ay sara kacaba, halka mesh ku leh tolmo wanaagsan waa u fududdahay in la gooyaa oo xoodaan ka mid ah qaabka.
Halkee ayaan ka iibsan kartaa mesh cayayaanka?
Haddii aad jeclaan lahayd caawimo kasta oo aad iibsatay fadlan ha ka waaban inaad nala soo wici on 0086-311-69013206 ama nala soo xiriir via email ama chat online.
Previous: Chain bowd Link
Next: Galvanized welded Gabion mesh
Korontada Wire galvanized
Dalool Birta mesh
PVC dahaarka welded Wire mesh
Hebei Samsung Birta Wire mesh saaridda Co., Ltd